रसुवा नाकाबाट चिनियाँ सवारी साधनको आयातमा वृद्धि – Sulsule
रसुवा नाकाबाट चिनियाँ सवारी साधनको आयातमा वृद्धि
सुलसुले २०७८ साउन ७ गते ११:५३ मा प्रकाशित
गत आवमा रसुवागढी नाकाबाट कूल रु १८ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख ६१ ह्जार बराबरको चिनियाँ सामग्री नेपाल भित्रिएको भन्सार तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्राप्त माल सामग्रीको मापदण्डअनुरूप मूल्याङ्कनबाट भन्सार, अन्तःशुल्कका साथै मूल्य अभिवृद्धि करसमेतका तीन शीर्षकबाट गत आव रु. तीन अर्ब ५४ करोड २७ लाख ९३ हजार असुली भई सो रकम राज्य कोषमा दाखिला भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले राससलाई जानकारी दिए ।
विगतका वर्षमा रु. आठ अर्ब २७ करोड ४५ लाख असुली भएकोमा गत वर्ष सामानको आयात परिमाण अत्यन्तै न्यून हुँदा भन्सार शुल्कबाट उठ्ने राजस्वमा गिरावट आएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । यसरी राजस्व गिरावटको मुख्य बाधक भने दोस्रो लहरको कोभिड सङ्क्रमण रहेको छ ।